Wasaaradda A. Dibadda Somalia oo afar gaadiidka martida ka heshay Dowladda Korea – STAR FM SOMALIA
Wasaaradda A. Dibadda Somalia oo afar gaadiidka martida ka heshay Dowladda Korea
Wasaaradda Arrimaha Dibadda iyo dhiira gelinta Maalgashiga dowladda Soomaaliya ayaa ka gudoontay wasaaradda arrimaha dibadda ee Koofur Kuuriya afar gaadiidka martida ah, kadib munaasabad ka dhacday magaalada Nairobi.
Wasiir kuxigeenka Wasaaradda Arrimaha Dibadda ayaa ka guddoomay gawaarida mas’uul ka tirsan Wasaaradda Arrimaha Dibadda Kuuriya, waxaana uu ka mahad celiyay gaadiidkan loogu deeqay.
Gaadiidkan ayaa Wasaaraddu u adeegsan doontaa martida shisheeye ee dalka soo booqata , waxa ay qeyb ka noqon doonaan dadaalo balaaran oo Wasaaradda lagu qalabeyn doono , laguna tayeyn doono habsami u socodka shaqo iyo shaqaale .
Sidoo kale Wasaaradda ayaa sheegtay in is bedelada iyo horumarada la hiigsanayo ay yihiin kuwa loogu adeeganayo dadka iyo dalka Soomaaliyeed, laguna ilaalinayo madax banaanida, qaranimada, midnimada iyo wada jirka umadda Soomaaliyeed.
Ugu dambeyn Wasaaradda Arrimaha Dibadda ayaa sheegtay inay soo hagaagayaan xiriirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya la leedahay dalalka Caalamka, islam markaana safiiro badan dalka loo soo magacaabayo.
Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa dhaliil u jeediyay qaabka uu u socdo howl galka ka dhanka ah Al-Shabaab
Shirka madasha heerka sare ee wadamada iyo hay’adaha iskaashiga la leh Soomaaliya ayaa gelinkii dambe ee maanta lagu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho.